Ergeyga gaarka ah ee midowga “Soomaaliya hadda ayuu waaga u baryey…” – Qaranimo Online
You are here: Home 2017 February 15 Ergeyga gaarka ah ee midowga “Soomaaliya hadda ayuu waaga u baryey…”
Ergeyga gaarka ah ee midowga “Soomaaliya hadda ayuu waaga u baryey…”
Muqdisho | Febaraayo 15, 2017 – Ergeyga gaarka ah ee midowga Africa RANCISCO CAETANO JOSÉ MADEIRA ayaa ka hadlay doorashadii dhawaan ka dhacday dalka Soomaaliya markaas oo uu Maxamed Cabdulaahi Farmaajo helay codadkii ugu badnaa ee Xildhibaanada labada aqal ee Soomaaliya.
Ergeygaan ayaa ka dhawaajiyey in Soomaaliya uu hadda waaga u baryey maadaama ay doorteen sida uu sheegay madaxweynihii ku haboonaa xilkaaas oo uu ula jeeday Maxamed Cabdulaahi Farmaajo.
‘Soomaaliya iminka waxay leedahay madaxweyne si dimoqraadi ah ay u doorteen xubnaha labada aqal ee baarlamaanka qaran, waana madaxweyne xilkaas ku haboon’. Sidaa ayuu bayaan ku yiri.
‘Waxaan u hambalyaynayaa madaxweynaha la doortay Mudane Maxamed C/laahi Farmaajo. Waxaan u rajeynayaa guul haatan oo uu isku dayayo inuu dalka u horseedo mustaqbal ifaya’.
Eregeygaan ayaa tilmaamay in wax kasta oo la isku qabto ay xallin doonaan baarlamaanka maadaama wadanka uu yeeshay laba aqal isagoo ku tilmaamay in doorashadii 8dii bishaan dhacday ay gun dhig u aheyd in doorasho qof iyo cod ah ay dalka ka dhacdo sanadka 2020.
“ Waxaan hoggaamiyayaasha Soomaaliya ugu baaqayaa inay ka faa’ideystaan fursadaan hadda ay heystan oo ay garab istaagaan madaxweynaha cusub si loo gaaro dib u heshiisiin rasmi ah iyo midnimo qaran” ayuu hadalkiisa kusoo xiray.
Somaliland election: Will the self-declared state show East Africa how it’s done? November 8, 2017
Nin Dad Barakacayaal ah Ku Rasaaseeyey Caabud Waaq May 28, 2017
Somaliland wants to secede – here’s why caution is necessary September 9, 2016
Wasiirka caafimaadka oo la kulantay dhiggeeda dalka Kuwait October 10, 2015
Guddoomiyaha Baarlamanka oo Mushaaraadkii ka jaray Xildhibaanno December 22, 2015
Dowladda Soomaaliya oo Hub u dirtay Puntland March 18, 2016
Xaflad weyn oo lagu soo dhaweynayey Amb. Maxamed Mukhtaar Beeleey iyo dardargelinta siyaasada golaha isbedel doonka qowmiyada banaadiriga oo ka dhacday Columbus, Ohio. November 17, 2015
Qarax ka dhacay degmada Afgooye April 13, 2016
Maamulka Somaliland oo ka hadashay khilaafka Soomaalida iyo Oromada September 18, 2017
Madasha wadatashiga qaran oo goor dhow la soo gaba gabeeyay April 12, 2016
VIDEO: Xarigii Xiddigaha geeska Afrika iyo jawaabihii Nakruuma & Nimca Degan ! October 2, 2015
Guddiga Madax banaan ee Xuduudaha oo si kulul uga hadlay derbiga Kenya ay ka dhisayso xadka War-saxaafadeed November 15, 2015